ဘယ်လုပ်ငန်းတွေကို ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေသလဲ?
Whom are you giving service to? We are serving our value clients in 25 countries. By business type, our clients include multi-national corporations like BBC, Petronas, Armadeus, Myanmar government departments, and foreign embassies. They vary from movie directors in Hollywood to airlines and tour operators in Myanmar, and clinics in Australia.
ကျွန်တော်တို့ တန်ဘိုးထားတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖောက်သည် အလုပ်အပ်နှံသူ လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာ ကမ္ဘာ့အရှေ့ဖျား သြစတြေးလျား နိုင်ငံက ဆေးခန်းတွေကနေ၊ မြန်မာနိုင်ငံက လေကြောင်းလိုင်းတွေ၊ ဟိုတယ်တွေ၊ ခရီးသွား လုပ်ငန်းတွေကနေ၊ ကမ္ဘာ့အနောက်ဖက်ဆုံး အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ ဟောလီဝုဒ်က ရုပ်ရှင် ဒါရိုက်တာတွေ အထိ ပါဝင်ပါတယ်။
ဒီနိုင်ငံတွေမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေ ရှိပါတယ်။